ဖုန်းကိုအားသွင်းနေစဉ် ဘက်ထရီမထိခိုက်အောင်ရှောင်ရှားရမယ့်အချက်များ – DigitalTimes.com.mm
221 Shares 140 Views
၁. ပထမဆုံး တတ်နိုင်ရင်တော့ ဖုန်းနဲ့တစ်ပါတည်းပါလာတဲ့အားသွင်းကြိုးနဲ့ပဲသွင်းပါ။ တခြားအားသွင်းကြိုးတွေက အားဝင်တာလည်းနှေးနိုင်ပြီးကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကြာရှည်ခံနိုင်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။
၂. ဖုန်းဝယ်တဲ့အခါ ဘက်ထရီပမာဏဘယ်လောက်ပါတယ်မပါတယ်ဆိုတာက အရေးမကြီးဘူးမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ထက်အရေးကြီးတာက ဖုန်ကိုအားပြည့်သွားတာတောင်မဖြုတ်တာတို့ အားလုံးဝမကျန်တော့တဲ့အထိသုံးတာတွေရှောင်ပါ။
၃. ဖုန်းကိုအေးအောင်ထားပါ အပူဆိုတာက ဘက်ထရီအတွက်ရန်သူဖြစ်လို့ ပူလေလေ ဘက်ထရီပိုကုန်လေလေပါ။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အပူနဲ့တိုက်ရိုက်မထိဘဲ အေးအောင်ထားပေးရပါမယ်။
၄. ဘက်ထရီရဲ့သက်တမ်းကို အကြာကြီးခံဖို့အတွက်ဆိုရင် အား ၅၀% ထက်မှာပဲ အမြဲရှိနေပါစေ။
၅. ဘက်ထရီကို အားလုံးဝမရှိတဲ့အထိသုံး အားအပြည့်ထိပစ်ထားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ၅၀% အထက်မှာပဲ နည်းနည်းချင်းသွင်းတာက ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းကို နှစ်တော်တော်ကြာတဲ့အချိန်ထိ ခံချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
၁. ပထမဆုံး တတျနိုငျရငျတော့ ဖုနျးနဲ့တဈပါတညျးပါလာတဲ့အားသှငျးကွိုးနဲ့ပဲသှငျးပါ။ တခွားအားသှငျးကွိုးတှကေ အားဝငျတာလညျးနှေးနိုငျပွီးကိုယျ့ဖုနျးရဲ့ဘကျထရီကွာရှညျခံနိုငျမှုကိုလညျး ထိခိုကျစပေါတယျ။
၂. ဖုနျးဝယျတဲ့အခါ ဘကျထရီပမာဏဘယျလောကျပါတယျမပါတယျဆိုတာက အရေးမကွီးဘူးမဟုတျပမေယျ့ သူ့ထကျအရေးကွီးတာက ဖုနျကိုအားပွညျ့သှားတာတောငျမဖွုတျတာတို့ အားလုံးဝမကနျြတော့တဲ့အထိသုံးတာတှရှေောငျပါ။
၃. ဖုနျးကိုအေးအောငျထားပါ အပူဆိုတာက ဘကျထရီအတှကျရနျသူဖွဈလို့ ပူလလေေ ဘကျထရီပိုကုနျလလေပေါ။ ဒါကွောငျ့ တတျနိုငျသလောကျ အပူနဲ့တိုကျရိုကျမထိဘဲ အေးအောငျထားပေးရပါမယျ။
၄. ဘကျထရီရဲ့သကျတမျးကို အကွာကွီးခံဖို့အတှကျဆိုရငျ အား ၅၀% ထကျမှာပဲ အမွဲရှိနပေါစေ။
၅. ဘကျထရီကို အားလုံးဝမရှိတဲ့အထိသုံး အားအပွညျ့ထိပဈထားတာမြိုးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ ၅၀% အထကျမှာပဲ နညျးနညျးခငျြးသှငျးတာက ဘကျထရီသကျတမျးကိုပိုကွာရှညျခံစပေါတယျ။
ကိုယျ့ဖုနျးရဲ့ဘကျထရီသကျတမျးကို နှဈတျောတျောကွာတဲ့အခြိနျထိ ခံခငျြတယျဆိုရငျ ဒီအခကျြလေးတှကေိုမှတျထားသငျ့ပါတယျ။
ဘာဂါအသားပြားတွေကိုအလိုအလျောက်လှန်ပေးမယ့် Flippy robot
ကိုယ့်ဖုန်းကို အတွင်းအပြင် ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြမလဲ?